Dowladda Israel oo Kenya ka taageereysa dhismaha darbiga ay ka dhiseyso xadka Soomaaliya – STAR FM SOMALIA
Iyadoo Ra’iisul Wasaaraha Israel Benyamin Netanyahu uu booqasho ku marayo dalalka geeska Afrika ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in dowladda Israel gacan ka geysaneyso qorshaha ay Kenya ku dooneyso inay darbi dheer ka dhisato xadka ay la wadaagto Soomaaliya.
Qorshaha Kenya oo soo socotay tan iyo sanadkii hore ayaa ahaa mid mugdi geliyay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo caro badan iyo qeyla-dhaan ka dhalatay.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in sababaha ay darbiga uga dhiseyso xuduuda ay tahay sidii ay uga hortagi laheyd weerarada Al-Shabaab ka geystaan gudaha dalkeeda.
Ra’iisul Wasaaraha Israel Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in Kenya ay ka gacan siin doonaan arrimo badan oo uu ka mid yahay ammaanka iyo la dagaalanka Argagixisada.
Xiriirka Kenya iyo Israel ayaa ahaa mid wanaagsan ganacsi ahaan marka loo eego, iyadoo Xarunta Ganacsiga ee Westgate Mall oo Al-Shabaab weerartay sanadkii 2013 waxaa leh Ganacsato u dhalatay Israel.
Warbaahinta Kenya ayaa sheegay in dowladda Israel ay si dadban ugu muujisay taageerada darbiga, waxaana taageera Israel ay noqon doontaa mid xoojisa dhismaha darbigaas oo aan wali xooggiisa bilaaban.
Ra’iisul Wasaaraha Israel ayaa booqashadiisa uu ku marayo dalalka Geeska Afrika ayaa waxaa uu maanta ku soo gaba gabeynayaa dalka Itoobiya.
Kenya ayaa dooneysa in darbiga ay ka dhiseyso xuduuda inay u ekeyso qaabka Israel ay gidaar weyn uga dhistay dhulka ku yaalla daanta Galbeed oo ay Israel xoog uga heysato dadka reer Falastiin.